Dallada SSE oo dareen taban ka muujisey ficilada Xisbiyada Qaranka Somaliland |
Dallada SSE oo dareen taban ka muujisey ficilada Xisbiyada Qaranka Somaliland
Tixraac: SSE/DK 052/31122016
Dallada SSE oo dareen taban ka muujisey ficilada Xisbiyada
Dallada SSE oo ay ka bahoobeen ururada Somaliland ee Yurub waxa ay baaqan kooban ku muujinayaan dareenka taban ee ka dhashay weeraro dhinaca afka ah oo u dhaxeeya hoggaanka iyo madaxda Xisbiyada Qaranka Somaliland.
Waxaynu ka warqabnaa in sannadka 2017ka Somalilanday waajahayso qabashada doorashada Madaxtooyada. Waa doorasho ay ku tartamayaan saddexda xisbi Qaran ee Kulmiye, Wadani iyo Ucid. Waxa muuqda ifafaalooyin foolxun oo karaamo daro ku ah Qaranimada Somaliland.
Walow aynu qaadanay nidaamka furfurnaanta oo aynu abuuranay Xisbiyo siyaasadeed oo lagu tartamo marka ay doorasho timaado ayaa haddana waxaynu mawkhaati ka nahay in nidaamka ololeynta ee Xisbiyadeenu uu udub dheexaad u yahay abaabulka reeraha isla markaana dheganheenu ay maqalayaan waxay agadgtahay in la dhageysto. Xaqiiqdu waxay tahay in la abuurey xaalad loo kala fadhiyo qabyaalad, hayb iyo qolo-qolo. Haddalo filanwaa ah ayaa ka soo yeedhaya qaar ka mid mas’uuliyiinta Axsaabta Siyaasadda Somaliland. Ficilo hurinaya qabyaalada iyo qaybsanaanta bulshada ayaa aad isu soo taraya. Haddalada ka soo yeedhaya marka ay Xisbiyadu qabanayaan kulano ayaa ah qaar kicinaya dareenka isla markaana abuuraya kala fogaanshaha Bulshada reer Somaliland.
Maalmahan u dambeeyay waxa soo kordhey in hoggaanka Xisbiyada gaar ahaan Kulmiye iyo Waddani ay toos weerar dhinaca afka ah saxaafada la isku mariyay. Haddalada saxaafadu soo tabisey waxay ahaayeen qaar deelqaaf ku ah haybada Qaranka Somaliland. Waxay ahaayeen haddalo kala fogeynaya wadashaqeynta iyo xidhiidhka looga baahanyahay inay dhexmaraan axsaabta ku loolamaya tartanka doorashada Madaxtooyada. Waxay ahaayeen haddalo welwel iyo walaac ku abuurey dadka reer Somaliland ee hanka iyo horumarka Somaliland danaynaya. Waxay ahaayeen haddalo farax gelinayay inta cadwoga u ah Somaliland.
Halka aynu Higsanayno iyo waxa inala gudboon sannadka inagu soo fool leh ee 2017
Sannadkan aynu ka soo gudubnay ee 2016ka waxaynu la kulanay labo abaarood oo aad u adag. Gobbolada Galbeedka ayaa horraantii sannadka 2016ka ay abaar xooggani ku dhufatey, taasoo si Qaranimo ah aynu ugu wada gurmanay. Isla sannadkan ayaa haddana dhinaca Bariga ay abaar aad u ba’ani ay haleeshay taasoo ilaa hadda ina haysa. Xoolo badan ayaa le’day, oo waxa hadda khatar ku jira nolsoshii dadka. Halka aynu maanta naalo iyo hab-dhaqanka hoggaanka iyo mas’uuliyiingta Xisbiyadeenu waa mid aad u kala fog. Sannadka soo socda waxa loo ballansanyahay qabashada doorashada iyada oo duruufo adagi taaganyihiin. Waxa loo baahanyahay in hoggaanka Xisbiyadeenu ay iskaga soo dhowaadaan halka ay hadda kala taaganyihiin. Mahuraan ayay tahay in aad looga shaqeeyo midnimada bulshada reer Somaliland si markaa ay inoogu qabsoonto doorasho loogu tartamo si xalaal ah oo bilaa xanaf ah. Hoggaanka Xisbiyada iyo xukuumadda Somaliland waa inay ogsoonaadaan in haddafka keliya ee aynu ku guuleysan karnaa inuu yahay midnimo iyo wadajir. Aqoonsiga aynu raadinaynaa waa mid shuruudiisa iyo furihiisu uu yahay mid ku xidhan kolba sida aynu u adkeyno midnimaddeena iyo horumarka bulshadeena.
Sannadka 2016ka imtixaano adag ayaynu ka soo gudubnay oo ay ugu muhiimsanaayeen khilaafkii ba’naa ee saddexda Xisbi Qaran mid walba gudihiisa ka dhashay ka dib markii ay ku tartamayeen hoggaanka musharaxnimada Xisbiga. Waa Ilaahay mahadii in maanta saddex musharax ay taaganyihiin, balse waxa mahuraan ah in Xisbi walba uu culeyska saaro barnaamijka iyo qorshayaasha uu ku horumarinayo ummada marka uu ku guuleysto doorashadad, halka aad moodo in khilaafaad iyo haddalo is-weerar ah la isku marinayo dhinaca saxaafada.
Gunaanad ahaan waxa naga xasuusin ama dardaaran ah in la ogsoonaado in cadowga Somaliland uu badanyahay. Mashaariic iyo qorshayaal aan tiro yareyn ayaa inagu soo maqan oo la rabo in lagu dhantaalo midnimada dadka reer Somaliland ee ilaa hadda ku suntan ahaanshaha hal-qudha. Mas’uuliyad ayaa inaga wada saaran adkeynta midnimada laakiin mas’uuliyad gaar ahi waxay sii saarantahay Xukuumadda, Golayaasha kale ee Qaranka iyo weliba Axsaabta ku tartamaysa doorshada oo iyaga looga baahanyahay inay muujiyaan hoggaan tusaale u noqda bulshada inteeda kale. Dallada ahaan waxa kale oo aanu baaqan ku muujinaynaa doorka muhiimka ah ee leeyhiin qaybaha kale ee bulshada oo ay ka mid yihiin Culimada, Ururada bulshada, Aqoonyahanka iyo wax-
garadka Somaliland, salaadiinta iyo odayaasha dhaqanka iyo weliba doorka ugu muhiimsan oo ay leeyihiin saxaafada iyo warbaahinta Somaliland.